Dabeeyshii Urd oo gaartay heerkii ugu sarreeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dabeeyshii Urd oo ku dhufatay goobo ka mid ah koonfurta Sweden. sawir: Sawirle: Johan Nilsson / TT
Dabeeyshii Urd oo gaartay heerkii ugu sarreeyay
Dabayshii Urd oo waxyeelo geeysatay
La cusbooneeyay tisdag 27 december 2016 kl 11.04
La daabacay tisdag 27 december 2016 kl 10.13
Dabeeyl xooggan oo xalay ku dhufatay goobo ka mid ah koonfurta dalka Sweden ayaa u dhaaftay bariga dalka.
Qiyaastii qooysas gaareya 3 000 ayay la soo gudboonaatay koronto la’aan. Halka ey dhanka kale waxyeelooyin ra’sumaal ah soo gaareen, hase yeeshee aan illaa hadda lagu soo warramin cid ku wax yeeloowday.
Krister Kristoffersson, oo ku dhqan magaalada Helsingborg, ayaybiyo harqiyeen xalay garaash uu gawaarida ku xareey-san jiray.
– Waxaadmooddaa meel dabaal loogu talo-galey inay tahay, sida uu sheegay KristerKristoffersson.
Wakaaladda gaadiidka ayaa ku soo warrameeysa in ammaanka dartiiloo joojiyey tareemmada qaarkood, maadaama laga cabsi qabey geedaha qaarkood ooey dabeeyshu xididdaha u jartay. Iyadoona tareemmada la joojiyey ey u kalasocdaali jireen magaalooyinka Uddevalla - Strömstad, Göteborg- Udedevalla iyoVarberg- Borås.
– Waddooyinkaxaddiidka ee isaga goosha magaalooyinkaa ayaa xiran wixii xalay laga bilaabo,iyadoona la fileyo in saddexda galab-nimo dib loo furo, sida uu sheegay TomasPihl, kana howl-gala waaxda saxaafadda ee wakaaladda gaadiidka.